Derek Chauvin Oo Ahaa Ninkii Dilay Floyd Oo Xabsiga Laga Sii Daayey – Heemaal News Network
Maamulka xabsiga weyn ee Oak Park Heights ee gobolka Minnesota ayaa Arbacadii xaqiijiyey in Derek Chauvin uusan haatan ku jirin xabsiga. Dukumiintiyada maxkamadda ayaa sheegaya in lagu sii daayay damaanad dhan 1 milyan oo doolar, oo u dhiganta in ka badan 9 milyan oo karoon.
Sida ay qortay wakaalada wararka ee Reuters, waxaa lasii daayay shuruud ah in uusan ka shaqeyn booliska iyo in uusan la xiriirin qoyska George Floyd. Sidoo kale waa inuu dhiibaa dhammaan shatiyada hubka.
Dhammaan afartii sarkaal ee bilayska ahaa ee ka danbeeyey dilkii arxan darrada ahaa ee ka dhacay magaalada Minneapolis 25-kii Maajo ayaa sidaas lagu sii daayay.
Maalintii dilku dhacay maalintii ku xigtay ayaa saraakiishan shaqada laga ceyriyay. Halka Chauvin lagu soo oogay dacwad dil ah, seddexda kale waxaa lagu soo eedeeyay inay gacan ka geysteen dilka. Maxkamadeynta ayaa loo qorsheeyay inay bilaabato bisha Maarso ee sanadka soo socda.
Buubaa Oo Dhaliilay Qaab Dhismeedka Xisbiyadda Beelaha Somaliland